IMDB: 4.8/10 502 votes
Prometheus (2012) Prometheus 2012 Review ၂၀ ရာစုအတှငျးထှကျရှိခဲ့တဲ့ Alien ရုပျရှငျတှကေိုကြောရိုးယူထားပါတယျ။ လူသားတှရေဲ့အစ ဖနျဆငျးရှငျကိုရှာဖှခေငျြသူ ဒေါကျတာ Elizabeth Shaw ဦးဆောငျတဲ့အဖှဲ့ဟာ ၄နှဈကွာခရီးဆနျ့ပွီး ဝေးကှာတဲ့ ကမ်ဘာတဈခုဆီရောကျရှိခြိနျမှာတော့ ဖနျဆငျးရှငျတှကေ သူထငျထားသလို လူသားတှအေပျေါကောငျးကြိုးပေးမှာမဟုတျမှနျး သိလိုကျရတဲ့အခါ... Oscar nomination ဝငျ ရုပျရှငျတဈခုဖွဈပွီး အခွားဆု ၆ ဆုလညျးရရှိထားပါတယျ။ ရုပျရှငျကားကို Archi Thang Gyi မှ ဘာသာပွနျပေးထားပွီး အညှနျးကိုလဲ ကိုယျတိုငျရေးပေးထားပါတယျ။ ====================================အစဉျလိုကျတိုငျး ကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ Alien (1979) Aliens (1986) Alien3(1992) Alien: Resurrection (1997) Prometheus (2012) Alien: Covenant (2017)Prometheus 2012 Review ၂၀ ရာစုအတွင်းထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Alien ရုပ်ရှင်တွေကိုကျောရိုးယူထားပါတယ်။ လူသားတွေရဲ့အစ ဖန်ဆင်းရှင်ကိုရှာဖွေချင်သူ ဒေါက်တာ Elizabeth Shaw ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ ၄နှစ်ကြာခရီးဆန့်ပြီး ဝေးကွာတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုဆီရောက်ရှိချိန်မှာတော့ ဖန်ဆင်းရှင်တွေက သူထင်ထားသလို လူသားတွေအပေါ်ကောင်းကျိုးပေးမှာမဟုတ်မှန်း သိလိုက်ရတဲ့အခါ... Oscar nomination ၀င် ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အခြားဆု ၆ ဆုလည်းရရှိထားပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကားကို Archi Thang Gyi မှ ဘာသာပြန်ပေးထားပြီး အညွှန်းကိုလဲ ကိုယ်တိုင်ရေးပေးထားပါတယ်။ ====================================အစဉ်လိုက်တိုင်း ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Alien (1979) Aliens (1986) Alien3(1992) Alien: Resurrection (1997) Prometheus ...
IMDB: 7.0/10 556,806 votes
The Bullet Vanishes (2012) The Bullet Vanishes ( 2012) ထွက် ဇာတ်ကားလေးကတော့ IMDB Rating 6.6 နဲ့ Rotten Tomatoes 92% ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ Plot Twist တွေကလည်း အလန်းတွေပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ စုံထောက်အလုပ်လုပ်ဖို့ရူးသွပ်နေတဲ့ ထောင်မှုး ဆောင်ဒုန်လူ နဲ့ ထျန်းချန်မြို့မှာ သေနတ်ပစ်လက်အမြန်ဆုံး စုံထောက် ကောင်းကျွေး တို့ ပူးပေါင်းပြီး တစ္ဆေကျည်ဆန်အမှုကိုလိုက်ကြတာပါ။ တစ္ဆေကျည်ဆန်လို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းက လက်နက်စက်ရုံက အလုပ်သမလေး ယန် မတရားအသတ်ခံရချိန်မှာ ကျိန်စာတိုက် သွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ လူတွေတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ သေဆုံးကြပြီးတော့ ကျည်ဆန်ကိုရှာမတွေ့ပါဘူး။ တကယ့်ကျိန်စာကြောင့်ပဲလား။ ဒါမှမဟုတ် လူတစ်ယောက်ယောက်ကပဲ ဟန်ဆောင်ပြီး သတ်နေတာလားဆိုတာ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရမှာပါ။ ပြီးတော့ ဇာတ်ကားကို ကြည့်ရင်း မေးမိနေမှာက ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လူသတ်မှုဆိုတာ တကယ်ရှိလားဆိုတာပေါ့။(အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ d3mon ဖြစ်ပါတယ်) File size__( ...
IMDB: 6.6/10 1,726 votes
White Tiger(2012) ဒီတငျ့ကတော့ ဂြာမနျတို့ရဲ့ White Tiger ဆိုတဲ့တငျ့ပါ....[[[ ဒီ Tiger တငျ့အမြိုးအစားဟာ FURY ဆိုတဲ့ကားမှာ ဘရကျပဈတို့M4 Sherman တှကေို အားပါတရဖကျြဆီးပွသှားတာ ကွညျ့ဖူးတဲ့သူတှသေိမှာပါ]]တဈစီးထဲက ဖကျြဆီးသှားတော့ ရုရှားတငျ့တပျက အကွီးအကဲတှနေဲ့နညျးပညာသမားတှအေတှကျတော့ တကယျ့သှေးပကျြစရာပါပဲ...ပြောကျကြားစဈပုံစံဆငျနှဲနတေဲ့ ဒီ White Tiger ကွီးကွောငျ့မြားစှာအထိနာနတေဲ့ရုရှားတှဟော တနျပွနျတိုကျခိုကျဖို့ တငျ့တပျဖှဲစီစဉျပါတော့တယျ..ဒီအထဲမှာတော့ အတှအေ့ကွုံမြားစှာရှိနတေဲ့ တငျ့ကား(၁၅)စီးတိုကျခိုကျခံရစဉျမသပေဲကနျြရဈခဲ့တဲ့ ယာဉျမောငျးတဈဦးကို ခေါငျးဆောငျခနျ့ပွီး တိုကျခိုကျဖို့ကွံရှယျကွတယျ...ကိုငျး သူတို့အောငျမွငျမလားဆိုတာကိုတော့.....ကိုငျး တငျ့ကား စဈကားတှမှေ သဘောကွတဲ့သူတှအေတှကျကားကောငျးတဈကားဖွဈလို့ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး....File Size : (950 MB) and (380 MB) Quality : Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration…01:44:00 Genre : Action, Adventure, Fantasy Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Zwel Zan Aung Encoded by Phyo Pyae
IMDB: 6.1/10 2,863 votes
Madagascar 3: Europe’s Most Wanted (2012) Madagascar 3: Europe's Most Wanted (2012) IMDb - 6.8/10_____Rotten - 79% ဒီတဈခါတော့ Channel Myanmar ပရိတျသတျတှအေတှကျ ၂၀၁၂ ခုနှဈကထှကျရှိခဲ့တဲ့Animation ကားကောငျးလေးတဈကားတငျပေးလိုကျပါတယျ။Madagascar လို့ပွောလိုကျတာနဲ့ တလှဲတှလေုပျ ဟာသတှဖွေဈနတေတျတဲ့ ခွင်ျသကွေီ့း Alex နဲ့ သူ့သူငယျခငျြးတှဖွေဈကွတဲ့မွငျးကြား Marty သဈကုလားအုတျ Melman နဲ့ ရမွေငျးမကွီး Gloria တို့ကိုပွေးမွငျမိကွဦးမှာပါဒီနောကျဆုံးထှကျ Europe's Most Wanted မှာဆိုရငျ Alex နဲ့သူ့သူငယျခငျြးတှဟောသူတို့ရဲ့အိမျဖွဈတဲ့ New York's Central Park Zoo ကိုပွနျဖို့ကွိုးစားနကွေတုနျးပါဒါပမေဲ့ Monte Carlo ကာစီနိုမှာဘဏျဖောကျဖို့ကွိုးစားနတေဲ့ ပငျဂှငျးနဲ့မြောကျတှကေို သှားချေါရဖို့အကွောငျးဖနျလာပါတယျအဲ့လိုနဲ့ ပွငျသဈကတိရစ်ဆာနျထိနျးခြုပျရေးအရာရှိမကွီး Dubois နဲ့တိုးတဲ့အခါမှာ Alex တို့မမြှျောလငျ့တဲ့အခွအေနတှေနေဲ့ကွုံရပွနျပါတယျAlex တို့သူတို့ရဲ့အိမျကိုပွနျရောကျနိုငျပါ့မလား Dubois ကွီးကရော ဘယျလိုတှတေားဆီးမလဲဆိုတာ အရှကေ့ Madagascar 1 & ...
IMDB: 6.8/10 157,576 votes
The Impossible (2012) The Impossible (2012) IMDb - 7.6/10________Rotten - 81% ဒီကားလေးကတော့ ၂၀၁၂ ခုနှဈကထှကျရှိထားတဲ့ thriller/disaster film အမြိုးအစားဖွဈပွီးတော့ IMDb rating 7.6 အထိရရှိထားပါတယျ။ Spider-man မငျးသား Tom Holland ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ရုပျရှငျကားတဈကားလညျးဖွဈပါတယျ။ ၂၀၀၄ ခုနှဈကအိန်ဒိယသမုဒ်ဒရာထဲမှာဖွဈခဲ့တဲ့ငလငျြရဲ့နောကျဆကျတှဲ ဆူနာမီရလှေိုငျးတှေ ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ကမျးခွအေခြို့ကိုရိုကျခတျတဲ့အခြိနျမှာ အားလပျရကျအပနျးဖွခေရီးထှကျလာကွရငျး ဒီအဖွဈဆိုးကွီးနဲ့ကွုံခဲ့ရတဲ့နိုငျငံခွားသားမိသားစုတဈ စုအကွောငျးကိုရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ မိသားစုတဈစုကထိုငျးနိုငျငံခေါကျလကျကမျးခွကေို ခရဈစမတျပိတျရကျမှာလာလညျခဲ့ကွပါတယျ။ သူတို့မိသားစုဟာဒျီအဖွဈဆိုးကွီးမဖွဈခငျခရဈစမတျနအေ့ထိ ပြျောပြျောရှငျရှငျပဲ အားလပျရကျကိုကမျးခွမှောဖွတျသနျးနခေဲ့ကွတာပါ ခရဈစမတျအပွီးနောကျတဈရကျမှာတော့ မထငျထားခဲ့တဲ့အဖွဈဆိုးကွီးနဲ့အတူမိသားစုငါးယောကျ ကတကှဲတပွားစီဖွဈခဲ့ကွပါတယျ။ အဲ့ထဲကသားအကွီးဆုံးလေးလူးကပျဈနဲ့မိခငျဖွဈသူကတဈနရော သားအငယျလေးနှဈယောကျနဲ့ဖခငျဖွဈသူကတဈနရောစီဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။ သူတို့မိသားစုတှဘေယျလိုအခကျအခဲတှကွေုံရမှာလဲ? ပွနျပွီးတှကွေ့မလားဆိုတာကတော့ဒီကားလေးထဲမှာဆကျကွညျ့ပေးကွပါဦး။(ဇာတျလမျးအညှနျးနဲ့ဘာသာပွနျသူကတော့ Shwe Yee Oo ဖွဈပွီး Arkar Phyo မှာ Encode လုပျပေးထားပါတယျ) ဒီကား​လေးက​တော့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်​ကထွက်​ရှိထားတဲ့ thriller/disaster film အမျိုးအစားဖြစ်​ပြီး​တော့ IMDb rating 7.6 အထိရရှိထားပါတယ်​။ Spider-man မင်းသား Tom Holland ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားတဲ့ရုပ်​ရှင်​ကားတစ်​ကားလည်းဖြစ်​ပါတယ်​။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာဖြစ်​ခဲ့တဲ့ငလျင်​​ရဲ့​နောက်​ဆက်​တွဲ ဆူနာမီ​ရေလှိုင်း​တွေ​ ထိုင်းနိုင်​ငံရဲ့ကမ်း​ခြေအချို့ကိုရိုက်​ခတ်တဲ့အချိန်​မှာ အားလပ်​ရက်​အပန်း​ဖြေခရီးထွက်​လာကြရင်း ဒီအဖြစ်​ဆိုးကြီးနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့နိုင်​ငံခြားသားမိသားစုတစ်​ စုအ​ကြောင်းကိုရိုက်​ကူးထားတာဖြစ်​ပါတယ်​။ ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်းက​တော့ မိသားစုတစ်​စုက​ထိုင်းနိုင်​ငံ​ခေါက်​လက်​ကမ်း​ခြေကို ခရစ်​စမတ်​ပိတ်​ရက်​မှာလာလည်​ခဲ့ကြပါတယ်​။ သူတို့မိသားစုဟာဒီ်​အဖြစ်​ဆိုးကြီးမဖြစ်​ခင်​ခရစ်​စမတ်​​နေ့အထိ ​ပျော်​​ပျော်​ရွှင်​ရွှင်​ပဲ အားလပ်​ရက်​ကိုကမ်း​ခြေမှာဖြတ်​သန်း​နေခဲ့ကြတာပါ ခရစ်​စမတ်​အပြီး​​နောက်​တစ်​ရက်​မှာ​တော့ မထင်​ထားခဲ့တဲ့အဖြစ်​ဆိုးကြီးနဲ့အတူမိသားစုငါး​ယောက်​ ကတကွဲတပြားစီဖြစ်​ခဲ့ကြပါတယ်​။ အဲ့ထဲကသားအကြီးဆုံး​လေးလူးကပ်​စ်​နဲ့မိခင်​ဖြစ်​သူကတစ်​​နေရာ သားအငယ်​​လေးနှစ်ေ​ယာက်​နဲ့ဖခင်​ဖြစ်​သူကတစ်ေ​နရာစီဖြစ်​သွားခဲ့ပါတယ်​။ သူတို့မိသားစု​တွေဘယ်​လို​အခက်​အခဲ​တွေကြုံရမှာလဲ? ပြန်​ပြီး​တွေ့ကြမလားဆိုတာက​တော့ဒီကား​လေးထဲမှာဆက်​ကြည့်​​ပေးကြပါဦး။(ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ Shwe Yee Oo ဖြစ်ပြီး Arkar Phyo မှာ Encode ...
IMDB: 7.6/10 190,300 votes